Wasiir Isloow: intaan ku sugnaa Dhuusamareeb wax badan ayaa u qabsoomay qaranka.
Wednesday September 11, 2019 - 18:40:05 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Wasiirka Amniga Gudaha Xukumada Faderaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow Ducaale oo maanta ka soo qaybgalay shirka dib-u-heshiisiinta beelaha Galmudug ayaa ka warbixiyay waxyaaha Wasaarada Amniga Gudaha Soomaaliya ay ku guulaysatay intii uu ku su
Wasiirka Amniga Gudaha Xukumada Faderaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow Ducaale oo maanta ka soo qaybgalay shirka dib-u-heshiisiinta beelaha Galmudug ayaa ka warbixiyay waxyaaha Wasaarada Amniga Gudaha Soomaaliya ay ku guulaysatay intii uu ku sugnaa Dhuusamareeb.
Wasiirka ayaa sheegay in ay ku guulaysteen in ay isku dhafaan Ciidankii Ahlusunna iyo kuwa Xoogga dalka, sidoo kale ay qarameeyaan Ciidankii ku sugnaa deegaanka si ay ugu qayb qaataan Dib u dhiska Ciidanka Xoogga dalka oo uu sheegay in Xukumadaan Xoogga saarayso.
Wasiiir Isloow ayaa sheegay markii ay Dhuusamareeb gaareen ay Ciidankii Ahlusunna ay ku kala biiriyeen Ciidanka Xoogga Dalka ee qaybta 21 aad, Booliska ,Nabad Sugida iyo Asluubta sidoo kale ay dalacsiiyeen Saraakiishii Ahlusunna ay dalbatay waxa uuna tusaale u soo qaatay Taliyaha guutada 15 aad qayta 21 aad ee Ciidanka Xoogga dalka Generaal Mascuud Maxamed Warsame oo horay u ahaa Taliyahii Ciidanka Ahlusunna.
Mr Isloow ayaa sheegay in Saaraakiishii Booliska Ahlusunna ay tababar uga fureen Magaalada Muqdisho sidoo kale 15 kamid ah ay Jabuuti ugu direen Tababar dheeraad ah ka dibna deegaanka lagu soo celidoono sida ay u qabtaan howlaha muhiim ah ee yaalla.
Wasiirka amniga Gudaha Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow Ducaale ayaa sidoo kale sheeyay in ay wadaan Dadaalo ay ku doonayaan in ay howgalo ka dhan ah Al shabaab ku qaadeen degmooyinka Al shabaab Maamulaan ee Gobolada Dhexe ee Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in ay jiraan Ciidamo lagu diyaariyay Baladweyne kuwaas oo ay doonayaan in lageeyo degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud si halkaasi ay ugu qaataan tababaro Ciidan sida uu sheegay, waxaana jirtay in Waxgaradka Baladweyne ay ka horyimeed in Ciidan laga qaado Xarunta Gobolka Hiiraa lageeyo deegaanada Maamulka Galmudug.
Wasiir Isloow ayaa hadalkaan ka sheegay howlka uu ka socdo shirka dib u heshiinta beelaha Galmudug oo maalintii Afaraad ka socda Magaaladda Dhuusamareeb ee Caasimada Galmudug.